कसलाई पछ‍्याउँछन् सेलिब्रिटीहरू ? « Karobar Aja
ट्वीटरमा ट्रम्पका २ करोड ५४ लाख फलोअर्स छन् । उनको ट्वीटमा लाखौंले लाइक, रिप्लाई र रि–ट्वीट गर्छन् । ट्रम्प आफैंले भने ४३ जना मात्रै फलो गरेका छन् । खासमा कसलाई पछयाउँछन् उनी ? उनले रुचाएका मान्छे को हुन् ? ट्रम्प आफ्नै नामका कम्पनी, संघसंस्था एवं अमेरिकी राजनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मीलाई फलो गर्दा रहेछन् । दक्षिण अफ्रिकी गल्फर गेरी प्लेयर र रेस्लिङ खेलका प्रवर्दक भिन्स म्याकमाहोन पनि ट्रम्पले फलो गरेका व्यक्ति हुन् ।
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले १ हजार बढीलाई फलो गरेका छन् भने उनलाई फलो गर्नेको संख्या २ करोड ५२ लाख छ । बच्चनले थुप्रै खेलाडी, फनी ट्वीटस, फस्ट लेडीहरूको अर्काइभ र प्रेरणादायी भनाइ उल्लेख गरिएका अकाउन्टहरू फलो गरेका छन् । उनले रेस्लर जोन सिनाको फयान क्लब, चेल्सी क्लब, बिल गेटस् आदिको ‘पिछा गर्न’ चाहेछन् । २ करोड फलोअर्स भएका आमिर खानले क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर बाहेक बाँकी ८ जना कलाकारलाई फलो गरेका छन् । कोलम्बियन गायिका साकिराले मलाला फन्ड, गेट्स फाउन्डेसन, पोप फ्रान्सिस गरी १ सय ९२ जनालाई फलो गरेकी छन् । ४ हजार ५ सय २ वटा टीट गरिसकेकी उनलाई ४ करोड ३० लाखले फलो गरेका छन् । सलमान खानले सुरज पन्चोली, शाहरूख र आमिर खान गरी २३ जनालाई फलो गरेका छन् ।
बाबा रामदेवले चाहिँ हलिउड अभिनेता ज्याकी च्यान, क्रिकेटर पल निक्सन, नेपाली पत्रकार सुवास घिमिरे, तिब्बती गुरु दलाई लामालगायत २ सय २६ जनलाई फलो गर्दा रहेछन् । प्रबल गुरुङले बैंकर अनिल केशरी शाह, गायिका माइली साइरस, अभिनेता टम हयांक्स लगायतलाई पछयाएका छन् । ‘गङनम स्टाइल…’ गायक साइले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपती बाराक ओबामा, अभिनेता जिम क्यारे लगायतलाई नियालिरहेका हुन्छन् । धेरैबाट फलो गरिएका बिल गेट्स आफैंले चाहिँ अमिताभ बच्चन, लिओनार्दो डिक्याप्रियो, गायक जोन लिजेन्ड लगायतलाई पछयाएका छन् ।